JAWAAB: Bashiir Raage “Xusuuqii ka dhacay dugsigii Max’uud Axmed Cali wuxuu dhacay markii dadku wada waashay oo ay dabka gacanta ku dhigeen”
Sawirkii Dugsigii Sare ee Maxamuud Axmed Cali (Sawirqaade: Wariye Garaad Salaad Xirsi).
Xasuuqii loo geystay dadkayagii dulmiga iyo gardarrada loogu laayay dugsigii sare ee Maxamuud Axmed Cali, taariikhdu markii ay ahayd Feb. 10, 1991, ma noqon karo mid cudurdaar iyo marmarsiinyo loo samayn karo.
Aniga oo tixraacaya hadal laga soo wariyay ganacsade Bashiir Raage oo ka hadlay xasuuqii dugsigii sare ee Maxamuud Axmed Cali, laguna faafiyey Internet-ka Intrenetka, taariikhdu markii ay ahayd July 20, 2004; hadalkaas waxaa iiga muuqda ama laga dhadhansan karaa ereyo tibaaxaya in xasuuqaas uu ka hadlay loo aanayn karo dhibaatooyin uu ka tegay madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Gen. Maxamed Siyaad Barre.
Tusaale ahaan, Ganacsade Bashiir Raage wuxuu yiri: " … odayaal & cuqaal dooneysay in ay arrintaa ka hortagaan uuna ka mid ahaa Xaaji Abuukar Cumar Caddaan ayaa qaarna ay ku dhinteen qaarna ay ku dhaawacmeen markii ay is hortaageen falkaasi xusuuqa ahaa, wuxuuna xasuuqaasi qeyb ka ka ahaa fitnadii ay talaashay dowladii hore ee Marxuum Max’ed Siyaad Barre".
Inkasta oo hadalkaas siyaabo badan loo qaadan karo, anigu waxaan u arkaa in uu hordhac u yahay dood la isku difaacayo marka ay noqoto in laga xisaabtamo dhacdadii dugsigii Sare ee Maxamuud Axmed Cali, oo maxakamadi ay qaaddo tacaddiyadii dadkayaga loo geystay.
Haddaba, haddii Ganacsade Bashiir Raage uu hadalka sidaas ula jeedo, waxaan leeyahay xasuuqii loo geystay dadkayagii sida ba’an loo laayay in loo micneeyo fidno ay tallaashay dowladdii Gen. Maxamed Siyaad Barre waa arrin aan waaqic ahayn oo xaqiiqda ka fog, sababtoo ah ma jirin wax xiriir ah oo ka dhexeeyey dadkayagii la xasuuqay iyo xukuumaddi Gen. Maxamed Siyaad Barre marka laga reebo in ay ahaayeen oo keliya dad rayid ah (shacab) kana mid ahaa ummaddii Soomaaliyeed ee dalkoodii hooyo ku noolaa.
Waxaa kale oo xusid mudan in dadka la xasuuqay aanay ku lug lahayn wax maamul dowladeed ah hadday noqon lahayd jago-xafiiseed ama xil wasaaradeed oo hoos yimaada xukuumaddi Gen. Maxamed Siyaad Barre.
Sidaas darteed, waa arrin laga xumaado, waana waajib in laga hortago haddallada biya-dhacoodu ay yihiin in loo qiil raadiyo xasuuqii foosha xumaa ee lagula kacay dadkaas lagu laayay dugsigii sare ee Maxamuud Axmed Cali.
Waxaan cambaarayn kulul dusha uga tuuraynaa qof kasta, oo isaga oo raba in uu fushado dan gaar ahaaneed, doonaya in uu abuuro cudurdaar ama marmarsiinyo aan jirin oo loogu qiil samaynayo xasuuqii waxashnimada ahaa ee lala beegsaday dadkii sida bani-aadannimada ka baxsanayd loogu laayay dugsigii sare ee Maxamuud Axmed Cali.
Weligeed suurta gal noqon mayso, cid waxgarad ahna taageri mayso, in dadkaas la xasuuqay loo hindiso qiil ama hab kale oo dhiigoodii lagu xalaashanayo. Sidoo kale, arrintaasi ma horseedi doonto dib-u-heshiisiin lagu soo afjaro xadgudubkii lagula kacay dad tiradoodu gaareyso 86 qofood, oo dhammaantood ku abtirsada beesha Nuux Maxamuud, maalin keliyana lagu xasuuqay dugsigii sare ee Maxamuud Axmed Cali, 10-kii Feb, 1991-kii.
Dhinaca kale, waxaan si niyad ah u soo dhaweynaynaa fikradda wanaagsan oo ah, sida Ganacsade Bashiir Raage sheegayba, in xusuuqaasi uu ka mid noqon doono kuwa dhowaan loo samayn doono xus ballaaran oo lagu xasuusto waxyeelladii iyo tacaddiyadii loo geystay dad aan waxba galabsan.
Sidoo kale, Illaah baa mahad lehe, waxaan ammaanayaa war-fidiyeennada ku dadaalay in ay qormooyin iyo warbixinno sawirro wata ka diyaariyaan dhacdadii dugsigii sare ee Maxamuud Axmed Cali, oo dhammaan Soomaali meel kasta oo ay joogaanba ay ka xunyihiin falkaas waxashnimada ahaa ee lagu xasuuqay dad aan waxba galabsan. Ilaahey baa garsoore ah, oo ciddii ka dambeysay kala xisaabtami doona maalin Alle hortiis la taagan yahay, oo aan inkirmaadi jiri doonin, oo gacmuhu hadli doonaan luguhuna ku marag furi doonaan. War-fidiyeennada waxaan kula dardaarmayaa in ay xoogga saaraan sidii ay u raadin lahaayeen una soo gudbin lahaayeen wararka runta ah ee la xiriira dhacdadaas.
Tixraac: Sannadguuradii 13aad ee kasoo wareegtay xasuuqii ka dhacay Dugsigii Sare ee Maxamuud Axmed Cali.
Faafin: SomaliTalk.com | July 22, 2004